Global Aawaj | बत्ती जाने क्रम बढ्नुको कारण के लोडशेडिङ फेरि हुन लागेको हो ? बत्ती जाने क्रम बढ्नुको कारण के लोडशेडिङ फेरि हुन लागेको हो ?
बत्ती जाने क्रम बढ्नुको कारण के लोडशेडिङ फेरि हुन लागेको हो ?
२४ श्रावण २०७८ 12:59 pm
काठमाडौँ । काठमाण्डू उपत्यका र देशका अन्य भागमा पछिल्ला केही दिनहरूमा बत्ती जाने क्रम बढेको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। एकै दिनमा पटक पटक बत्ती जाने गरेको कहिलेकाहीँ एक घण्टा भन्दा बढी समय बत्ती जाने गरेको गुनासो सामाजिक सञ्जालहरूमा उपभोक्ताहरूले पोस्ट गर्ने गरेका छन्।
आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरहरूको कमजोरीका कारण काठमाण्डू लगायतका स्थानहरूमा बेला बेलामा बत्ती गइरहने समस्या देखिएको हो। ”पहिले पहिले आवश्यकता अनुसारको विद्युत् उपयोग हुनै पाउँदैन थियो। प्रसारण लाइनमा प्रसारण नै हुँदैन थियो। तर अहिले ‘फुल फ्लेजेड’ बिजुली छ, तर प्रसारण लाइन कमजोर छ। त्यसलाई अपग्रेड नगरेसम्म समस्या रहिनै रहन्छ,” उनले भने। नेपालमा विद्युत् व्यापार गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग मात्रै छ।
विद्युत् व्यापारका धेरै पाटा एउटै निकायले हेर्दा भार परेका हुँदा अपेक्षाकृत रूपमा मर्मत संहार र व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू हुन नसकेको आचार्य बताउँछन्। प्राधिकरण एक्लैले धान्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुला गरिदिनुपर्ने उत्पादकहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रको सरोकार ”नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धी हुने हुँदा” सेवामा सुधार हुने उनीहरूको भनाइ छ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा नयाँ प्रदायकहरूले दिने सेवामा मात्रै नभएर सेवा दिँदै आएको प्रदायकको गुणस्तरमा पनि सुधार हुने आचार्यले तर्क गरे।-बीबीसी